ရွှေတိဂုံဘုရားကို နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာဖို့ ဆိုတာ မသေခြာ တော့ဘူးဆိုတဲ့သူနှစ်ယောက် – မြန်မာနေ့စဉ်သတင်း
“ကျွန်တော် တွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ လူနှစ်ယောက်”
ကျွန်တော်က ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်ပါ။ကျွန်တော် လူ၂ယောက်ကို ဧည့်လမ်းညွှန် ဝန်ဆောင်မှု ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အင်္ဂလန်က သားအမိပါ။အမေက ၇၂ နှစ် , သား ၅၀ နှစ်။ သူတို့တွေက အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် ခံယူထားသူတွေပါ။ သက်သတ်လွတ်ပဲ စားတယ်။ နေ့တိုင်း တရားထိုင်တယ်။ သတ္တဝါလေးတွေကိုလည်း သနားတတ်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို လာခဲ့တာ အမေရဲ့ (၇၂) နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပချင်လို့ပါတဲ့။ ဒီမှာလို ဘိုဆန်ဆန် ဟက်ပီးဘတ်ဒေးတူးယူ မလုပ်။ ဖယောင်းတိုင်မီးမှုတ်ပြီးလည်း ဂုဏ်မယူ။
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ တွေ့တွေ့ချင်း…ရွှေတိဂုံဘုရားကို လေယာဉ်ပေါ်ကဖူးရတာ စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ။ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ လူလာဖြစ်ရတာ နင်တို့အရမ်းကံကောင်းတယ်။သူတို့ပြောမှပဲ အနီးနားမှာ ရှိပြီး တန်ဖိုးထားရ ကောင်းမှန်း မသိ။ နီးလျှက်နဲ့ ဝေးနေခဲ့တယ်။ငါတို့ဟိုတယ်မသွားခင် ရွှေတိဂုံဘုရား အရင် ဖူးချင်တယ်။
ပြည်လမ်းမပေါ်မှာ ကားခဏရပ်ပေးတော့ . . ကားပေါ်က ဆင်း , ဖိနပ်ချွတ် , ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ဦးခိုက်တယ်။ ရိုရိုသေသေလေး ခံစားကြည်နူး နေကြတယ်။
“ဒီလောက် ကြည်ညိုစရာကောင်းတာ ဒီတစ်ခါပဲ တွေ့ဖူးတယ်။ ငါတို့တော့ လူဖြစ်ကျိုး နပ်သွားပြီ။
“ဧည့်လမ်းညွှန် အိပ်ယာမဝင်ခင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးဖို့မမေ့နဲ့နော်”တဲ့ သူပြောမှတခါတလေ ဘုရားရှိခိုး ပျက်ကွက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်မိတယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက် ဟိုတယ် သွားကြိုတော့ သားအမိ နှစ်ယောက်စလုံး နှုတ်ဆက်ကြတယ်။
“ဧည့်လမ်းညွှန် မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ဒီမနက် တရားထိုင် ပြီးပြီလား ?
ဘုရားတော့ ရှိခိုးခဲ့တယ်။ လာကြို နောက်ကျမှာ စိုးလို့ တရားမထိုင်ခဲ့ရဘူး။နောက်နေ့မနက်တွေမှာ လာကြိုနောက်ကျပါစေ တရားတော့ ရအောင်ထိုင်ပါ။
မနက်စာ စားဖို့ ဖိတ်တော့ အတူဝင်စားဖြစ်တယ်။ အတု့ယူစရာတွေက တစ်ခုပြီးတစ်ခု။ မနက်စာ မစားခင်မှာ အစားအသောက် ပန်းကန်လေးကို တရိုတသေ ကိုင်ပြီး . .
“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါတယ် အရှင်ဘုရား”
ငါတို့နိုင်ငံမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွေ့ရင် . . .
မင်္ဂလာရှိသော နံနက်ခင်း —မင်္ဂလာရှိသော ညနေခင်း . . . လို့ ဘယ်သူမှ့နှုတ်မဆက်ကြတော့ဘူး။ “တရားထိုင် ပြီးပြီလား” ပဲ မေးကြတော့တယ်။
မွေးနေ့မနက် ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ဘုရားပန်းလဲ သောက်တော်ရေချမ်းကပ်,ဆီမီးပူဇော်ပြီး အလှူခံပုံးတွေထဲ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀ စီထည့်ပြီး ဆုတောင်းကြတယ်။ ဆုတောင်းပုံက. .
နောင်ဘဝမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ လူလာဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ပါရစေတဲ့။
ငှက်ကလေးတွေကို အစာကျွေးပြန်တော့ . . ငှက်ကလေးတွေ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အစာများများ စားရပါစေ။ ဒီငှက်ဘဝ ကုန်ဆုံးပြီးရင်လည်း လူပြန်ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးတတ်သူတွေ ဖြစ်ကြပါစေ။
သူတို့က ပြောသေးတယ်။ နေ့သစ်တစ်နေ့ စတိုင်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကို မရှိခိုးရသေးရင် ဘာအလုပ်မှ စမလုပ်ဘူး . .တဲ့။
ဘုရားတွေကို လှည့်ပတ်ပြတဲ့အခါမှာလည်း . .ဒီနေရာလေး ကောင်းတယ်။ ကင်မရာ နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်. . ပြောတော့ငါတို့ ကင်မရာ မယူလာဘူး။ မျက်စိနဲ့ဘဲ ကြည့်မယ်။
မေ့ကျန်ခဲ့လို့လား ? မေးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု ရှိရင် တစ်ခုအတွက် စိုးရိမ်ပူပန် ရတယ်။ နှစ်ခုရှိရင် နှစ်ခုအတွက် ပူပန်ရတယ်။ ဘာမှ မယူလာတော့ ဘာအတွက်မှ စိုးရိမ်ပူပန်စရာ မလိုတော့ဘူး. . . တဲ့။
ပြင်ဦးလွင် ရောက်လို့ . . .”ရထားလုံး စီးကြမယ် ဆိုတော့ . .မစီးဘူး။ ငါတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ။ တိရိစ္ဆာန် တွေကို သနားရမယ်။ ညှာတာရမယ်။ မဖြစ်မနေ သွားရမယ့် ခရီးဆိုမှ စီးသင့်မှ စီးမယ်။
လမ်းတလျှောက် အလှူခံမဏ္ဏပ် တွေ့တော့ ကားပေါ်ကနေ လှမ်းပစ်ပြီး လှူခဲ့တယ်။
– လှူတာလေ–လှူတယ်ဆိုရင် . . . ကားကိုရပ် , ဖြည်းဖြည်းဆင်း , ဖိနပ်ချွတ် , လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ရိုရိုသေသေ လှူရမှာပေါ့ , ခု နင့်ဟာက လှူတာနဲ့ မတူဘူး။ တိရိစ္ဆာန်ရုံထဲ ကားပတ်စီးပြီး ဆင်တွေ မျောက်တွေကို အစာကြဲချကျွေးသလို ဖြစ်နေပြီ။
အခြားဘာသာဝင်တွေ မြင်ရင် အထင်သေးသွားလိမ့်မယ်။ ငါလှူပြမယ် . . ဆိုပြီး ဖိနပ်ချွတ် လက်နှစ်ဖက်နဲ့ တရိုတသေ လှူပြသွားတယ်။
အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ရှက်လွန်းလို့ ဘာစကားလုံး သုံးရမှန်း မသိတော့ဘူး။ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်ထဲ ရောက်ပြန်တော့ . . ဧည့်လမ်းညွှန် . .ခဏလာပါဦး။ ဒါ ဆင်စွယ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဘီး , ဆံထိုး , ဆေးတံ , အရုပ်တွေ မဟုတ်လား ?
ဟုတ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ .?
တခြားဧည့်သည်တွေ ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင် သူတို့ မဝယ်အောင် နင်က တိုက်တွန်းရမယ်။ ပညာပေး ရမယ်။ ဒီဆင်စွယ်တွေကို ရဖို့ ဆင်တွေကို သတ်ရတာ။ ဒါကို ဝယ်ရင် ဆင်တွေကို သတ်ခိုင်းတာနဲ့ အတူတူပဲ။ မြတ်စွာဘုရား မကြိုက်ဘူး လို့ပြော။–ကြားလား ? ကျွန်တော် မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်တော့ပါဘူး။
ကလောသွားတဲ့ လမ်းမှာ . . .ဧည့်လမ်းညွှန် ငါအပေါ့ သွားချင်လို့ အိမ်သာတွေ့ရင် ရပ်ပေးဦး။ခြုံထူပြီး လမ်းရှင်းတဲ့ နေရာ ရောက်ရင် ရပ်ပေးမယ်။ လမ်းဘေးမှာ သွားလို့ရတယ်။ မြို့နဲ့ ဝေးနေသေးတယ်။ငါလမ်းဘေးမှာ အပေါ့မသွားဘူး။ ငါတို့အခု ရောက်နေတာ ယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံ။ လေးစားရမယ်။
နောက်တစ်နေ့ညနေမှာ လေယာဉ်နဲ့ ဘန်ကောက်ကို သွားကြတယ်။ အဲ့ဒီကတဆင့် အင်္ဂလန်ကို ပြန်ကြမှာပါ။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို အသွား ရွှေတိဂုံဘုရားကို အနောက်မုခ်ကနေ ဦးချကန်တော့သွားကြတယ်။
ရွှေတိဂုံဘုရားရေ . . .ကျွန်မတို့ ပြန်သွားကြပါပြီ။ ကျွန်မအသက် ကြီးနေလို့ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်လာဖို့ ဆိုတာ မသေခြာ တော့ဘူး။ နောင်ဘဝမှာ လူဖြစ်ခဲ့ရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဖြစ်ရပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဧည့်လမ်းညွှန်နဲ့လည်း အဆွေအမျိုး ဖြစ်ချင်ပါတယ် ဘုရား။
သူတို့သားအမိ နှစ်ယောက်နဲ့ သွားခဲ့ရတဲ့ (၁၄) ရက် ခရီးဟာ ကျွန်တော့အတွက်တော့ ရလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာ တွေက တစ်ပုံတစ်ပင်။ တကယ့် တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ အရာတွေချည်းပါပဲ။
( တင်လှိုင်မြင့် – ကြေးမုံ- စာ- ၆ )
Donated by ဓမ္မနှစ်သက်သူ။
“ကြှနျတျော တှခေဲ့ဖူးတဲ့ လူနှဈယောကျ”
ကြှနျတျောက ဧညျ့လမျးညှနျတဈယောကျပါ။ကြှနျတျော လူ၂ယောကျကို ဧညျ့လမျးညှနျ ဝနျဆောငျမှု ပေးခဲ့ရပါတယျ။ အင်ျဂလနျက သားအမိပါ။အမကေ ရ၂ နှဈ , သား ၅၀ နှဈ။ သူတို့တှကေ အင်ျဂလိပျလူမြိုးတှဖွေဈပမေယျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအဖွဈ ခံယူထားသူတှပေါ။ သကျသတျလှတျပဲ စားတယျ။ နတေို့ငျး တရားထိုငျတယျ။ သတ်တဝါလေးတှကေိုလညျး သနားတတျတယျ။
မွနျမာနိုငျငံကို လာခဲ့တာ အမရေဲ့ (၇၂) နှဈမွောကျ မှေးနကေို့ ဗုဒ်ဓဘာသာထှနျးကားတဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကငျြးပခငျြလို့ပါတဲ့။ ဒီမှာလို ဘိုဆနျဆနျ ဟကျပီးဘတျဒေးတူးယူ မလုပျ။ ဖယောငျးတိုငျမီးမှုတျပွီးလညျး ဂုဏျမယူ။
ရနျကုနျလဆေိပျမှာ တှတှေ့ခေ့ငျြး…ရှတေိဂုံဘုရားကို လယောဉျပျေါကဖူးရတာ စိတျခမျြးသာလိုကျတာ။ဗုဒ်ဓဘာသာထှနျးကားတဲ့ မွနျမာပွညျမှာ လူလာဖွဈရတာ နငျတို့အရမျးကံကောငျးတယျ။သူတို့ပွောမှပဲ အနီးနားမှာ ရှိပွီး တနျဖိုးထားရ ကောငျးမှနျး မသိ။ နီးလြှကျနဲ့ ဝေးနခေဲ့တယျ။ငါတို့ဟိုတယျမသှားခငျ ရှတေိဂုံဘုရား အရငျ ဖူးခငျြတယျ။
ပွညျလမျးမပျေါမှာ ကားခဏရပျပေးတော့ . . ကားပျေါက ဆငျး , ဖိနပျခြှတျ , ထိခွငျးငါးပါးနဲ့ ဦးခိုကျတယျ။ ရိုရိုသသေလေေး ခံစားကွညျနူး နကွေတယျ။
“ဒီလောကျ ကွညျညိုစရာကောငျးတာ ဒီတဈခါပဲ တှဖေူ့းတယျ။ ငါတို့တော့ လူဖွဈကြိုး နပျသှားပွီ။
ဟိုတယျကို လိုကျပို့ပွီး ပွနျခါနီးမှာ . .
“ဧညျ့လမျးညှနျ အိပျယာမဝငျခငျ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားကို ရှိခိုးဖို့မမနေဲ့နျော”တဲ့ သူပွောမှတခါတလေ ဘုရားရှိခိုး ပကျြကှကျတတျတဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ရှကျမိတယျ။
နောကျတဈနမေ့နကျ ဟိုတယျ သှားကွိုတော့ သားအမိ နှဈယောကျစလုံး နှုတျဆကျကွတယျ။
“ဧညျ့လမျးညှနျ မင်ျဂလာနံနကျခငျးပါ ဒီမနကျ တရားထိုငျ ပွီးပွီလား ?
ဘုရားတော့ ရှိခိုးခဲ့တယျ။ လာကွို နောကျကမြှာ စိုးလို့ တရားမထိုငျခဲ့ရဘူး။နောကျနမေ့နကျတှမှော လာကွိုနောကျကပြါစေ တရားတော့ ရအောငျထိုငျပါ။
သွျော . . . လေးစားဖို့ ကောငျးလိုကျတာ။
မနကျစာ စားဖို့ ဖိတျတော့ အတူဝငျစားဖွဈတယျ။ အတု့ယူစရာတှကေ တဈခုပွီးတဈခု။ မနကျစာ မစားခငျမှာ အစားအသောကျ ပနျးကနျလေးကို တရိုတသေ ကိုငျပွီး . .
“ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားကို ဆကျကပျလှူဒါနျးပါတယျ အရှငျဘုရား”
ကြှနျတျောကတော့ အရငျစားလိုကျမိလို့ မကျြနှာဘယျသှားထားရမှနျး မသိဘူး။
ငါတို့နိုငျငံမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ တှရေ့ငျ . . .
မင်ျဂလာရှိသော နံနကျခငျး —မင်ျဂလာရှိသော ညနခေငျး . . . လို့ ဘယျသူမှ့နှုတျမဆကျကွတော့ဘူး။ “တရားထိုငျ ပွီးပွီလား” ပဲ မေးကွတော့တယျ။
မှေးနမေ့နကျ ရှတေိဂုံဘုရားမှာ ဘုရားပနျးလဲ သောကျတျောရခေမျြးကပျ,ဆီမီးပူဇျောပွီး အလှူခံပုံးတှထေဲ အမရေိကနျဒျေါလာ ၅၀ စီထညျ့ပွီး ဆုတောငျးကွတယျ။ ဆုတောငျးပုံက. .
နောငျဘဝမှာ ဗုဒ်ဓဘာသာ ထှနျးကားတဲ့ မွနျမာပွညျမှာ လူလာဖွဈပွီး ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ ဖွဈပါရစတေဲ့။
ငှကျကလေးတှကေို အစာကြှေးပွနျတော့ . . ငှကျကလေးတှေ နစေ့ဉျနတေို့ငျး အစာမြားမြား စားရပါစေ။ ဒီငှကျဘဝ ကုနျဆုံးပွီးရငျလညျး လူပွနျဖွဈပွီး ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားကို ရှိခိုးတတျသူတှေ ဖွဈကွပါစေ။
သူတို့က ပွောသေးတယျ။ နသေ့ဈတဈနေ့ စတိုငျး ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားကို မရှိခိုးရသေးရငျ ဘာအလုပျမှ စမလုပျဘူး . .တဲ့။
ဘုရားတှကေို လှညျ့ပတျပွတဲ့အခါမှာလညျး . .ဒီနရောလေး ကောငျးတယျ။ ကငျမရာ နဲ့ ဓါတျပုံရိုကျလို့ရတယျ. . ပွောတော့ငါတို့ ကငျမရာ မယူလာဘူး။ မကျြစိနဲ့ဘဲ ကွညျ့မယျ။
မကေ့နျြခဲ့လို့လား ? မေးတော့ပိုငျဆိုငျမှုတဈခု ရှိရငျ တဈခုအတှကျ စိုးရိမျပူပနျ ရတယျ။ နှဈခုရှိရငျ နှဈခုအတှကျ ပူပနျရတယျ။ ဘာမှ မယူလာတော့ ဘာအတှကျမှ စိုးရိမျပူပနျစရာ မလိုတော့ဘူး. . . တဲ့။
ပွငျဦးလှငျ ရောကျလို့ . . .”ရထားလုံး စီးကွမယျ ဆိုတော့ . .မစီးဘူး။ ငါတို့က ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတှေ။ တိရိစ်ဆာနျ တှကေို သနားရမယျ။ ညှာတာရမယျ။ မဖွဈမနေ သှားရမယျ့ ခရီးဆိုမှ စီးသငျ့မှ စီးမယျ။
လမျးတလြှောကျ အလှူခံမဏ်ဏပျ တှတေ့ော့ ကားပျေါကနေ လှမျးပဈပွီး လှူခဲ့တယျ။
– လှူတာလေ–လှူတယျဆိုရငျ . . . ကားကိုရပျ , ဖွညျးဖွညျးဆငျး , ဖိနပျခြှတျ , လကျနှဈဖကျနဲ့ ရိုရိုသသေေ လှူရမှာပေါ့ , ခု နငျ့ဟာက လှူတာနဲ့ မတူဘူး။ တိရိစ်ဆာနျရုံထဲ ကားပတျစီးပွီး ဆငျတှေ မြောကျတှကေို အစာကွဲခကြှေးသလို ဖွဈနပွေီ။
အခွားဘာသာဝငျတှေ မွငျရငျ အထငျသေးသှားလိမျ့မယျ။ ငါလှူပွမယျ . . ဆိုပွီး ဖိနပျခြှတျ လကျနှဈဖကျနဲ့ တရိုတသေ လှူပွသှားတယျ။
အကွိမျကွိမျအခါခါ ရှကျလှနျးလို့ ဘာစကားလုံး သုံးရမှနျး မသိတော့ဘူး။ရှေးဟောငျးပစ်စညျးအရောငျးဆိုငျထဲ ရောကျပွနျတော့ . . ဧညျ့လမျးညှနျ . .ခဏလာပါဦး။ ဒါ ဆငျစှယျနဲ့ လုပျထားတဲ့ ဘီး , ဆံထိုး , ဆေးတံ , အရုပျတှေ မဟုတျလား ?
ဟုတျတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲ .?
တခွားဧညျ့သညျတှေ ဝယျခငျြတယျဆိုရငျ သူတို့ မဝယျအောငျ နငျက တိုကျတှနျးရမယျ။ ပညာပေး ရမယျ။ ဒီဆငျစှယျတှကေို ရဖို့ ဆငျတှကေို သတျရတာ။ ဒါကို ဝယျရငျ ဆငျတှကေို သတျခိုငျးတာနဲ့ အတူတူပဲ။ မွတျစှာဘုရား မကွိုကျဘူး လို့ပွော။–ကွားလား ? ကြှနျတျော မခြီးကြူးပဲ မနနေိုငျတော့ပါဘူး။
ကလောသှားတဲ့ လမျးမှာ . . .ဧညျ့လမျးညှနျ ငါအပေါ့ သှားခငျြလို့ အိမျသာတှရေ့ငျ ရပျပေးဦး။ခွုံထူပွီး လမျးရှငျးတဲ့ နရော ရောကျရငျ ရပျပေးမယျ။ လမျးဘေးမှာ သှားလို့ရတယျ။ မွို့နဲ့ ဝေးနသေေးတယျ။ငါလမျးဘေးမှာ အပေါ့မသှားဘူး။ ငါတို့အခု ရောကျနတော ယဉျကြေးတဲ့နိုငျငံ။ လေးစားရမယျ။
နောကျတဈနညေ့နမှော လယောဉျနဲ့ ဘနျကောကျကို သှားကွတယျ။ အဲ့ဒီကတဆငျ့ အင်ျဂလနျကို ပွနျကွမှာပါ။ ရနျကုနျလဆေိပျကို အသှား ရှတေိဂုံဘုရားကို အနောကျမုချကနေ ဦးခကြနျတော့သှားကွတယျ။
ရှတေိဂုံဘုရားရေ . . .ကြှနျမတို့ ပွနျသှားကွပါပွီ။ ကြှနျမအသကျ ကွီးနလေို့ နောကျတဈခေါကျ ပွနျလာဖို့ ဆိုတာ မသခွော တော့ဘူး။ နောငျဘဝမှာ လူဖွဈခဲ့ရငျ မွနျမာနိုငျငံမှာ လူဖွဈရပွီး ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျ ဖွဈခငျြပါတယျ။ ကြှနျမ ဧညျ့လမျးညှနျနဲ့လညျး အဆှအေမြိုး ဖွဈခငျြပါတယျ ဘုရား။
မကျြရညျတှနေဲ့ စိုရှဲနတေဲ့ အမကေို သားဖွဈသူက ဖေးကူမပွီး ကားပျေါ ကွငျကွငျနာနာ ချေါသှားတယျ။
သူတို့သားအမိ နှဈယောကျနဲ့ သှားခဲ့ရတဲ့ (၁၄) ရကျ ခရီးဟာ ကြှနျတော့အတှကျတော့ ရလိုကျတဲ့ သငျခနျးစာ တှကေ တဈပုံတဈပငျ။ တကယျ့ တနျဖိုး မဖွတျနိုငျတဲ့ အရာတှခေညျြးပါပဲ။
( တငျလှိုငျမွငျ့ – ကွေးမုံ- စာ- ၆ )
Donated by ဓမ်မနှဈသကျသူ။
ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းရဲ့ အမာခံပရိသတ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြလိုက်တဲ့ ပြေတီဦးတို့ ဇနီးမောင်နှံ